A ga-ebido OnePlus 6T na Ọktọba yana mmụba ego gụnyere | Gam akporosis
Ọnwa ole na ole gara aga, OnePlus 6 kụrụ ahịa. Ọ bụ ọkwa ọhụrụ dị elu nke akara ndị China, nke nwere ọganiihu na ahịa mba ụwa. Dị ka ọ dị na mbụ, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na nsụgharị ka mma nke ga-abata n'oge mgbụsị akwụkwọ. Anyị na-ekwu maka OnePlus 6T, nke rutere anyị nso nwere ike ịbụ ụbọchị mmalite ya, opekata mpe nwa oge.
Nke a OnePlus 6T ga-abụ nsụgharị yiri nke ahụ nke ekwentị kwalitere ọnwa ole na ole gara aga. A na-atụ anya ụfọdụ mmezi, ọ bụ ezie na ugbu a amabeghị akụkụ ndị a ga-eme mmezi a.
Ekwentị a tụrụ anya na ọ ga-aga ahịa n’Ọktọba. Ya mere ọnwa ise gafere n’agbata mwepụta nke ọ bụla n’ime ụdị ndị nrụpụta abụọ ahụ. Oge dị mkpirikpi, nke ahụ nwekwara ike imetụta ọrịre nke ekwentị abụọ ahụ.
Ọzọkwa, a na-atụ anya na OnePlus 6T ga-abịa jiri ọnụ ahịa ụgwọ. Enweghi ike ikwenye, n'agbanyeghị ụfọdụ mgbasa ozi na-ekwu na ekwentị ga-efu $ 550. Nke bụ ntakịrị ntakịrị mmụba, nke naanị $ 20, ma e jiri ya tụnyere ụdị nke izizi emere n'oge opupu ihe ubi. Obere ihe di iche na nke a.
Ọ bụ ezie na a na-akọcha ika ahụ maka eziokwu ahụ bụ na ụdị ya na-arị elu na ọnụ ahịa na afọ ọ bụla na-agafe. Yabụ, ahịa ahụ agaghị enweta nke ọma mmụba ọnụego nke ekwesịrị ịhazi maka OnePlus 6T a. Ọ bụrụ na mmụba ọnụego a bụ nke ikpeazụ.
Ugbu a mgbanwe ndị a ga-ewebata na OnePlus 6T a amaghị. Lastdị afọ gara aga nwere ụfọdụ ndozi nhazi, yana atụmatụ ole na ole ndị ọzọ. Ma mgbanwe ndị ahụ karịrị akarị. Yabụ, ọ dị ka afọ a anyị anaghị atụ anya mgbanwe dị egwu site na otu ụdị gaa na nke ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 6T ga - abata na Ọktọba na ịrị elu ọnụego